User | YaminThu | Submitted | ShweHub
YaminThu | Submitted
By YaminThu 2731 days ago on အားကစား from www.myawady.com.mm
By YaminThu 2731 days ago on အထွေထွေ from www.myawady.com.mm
By YaminThu 2731 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from www.myawady.com.mm
By YaminThu 2741 days ago on အတွေးအမြင် from burma.irrawaddy.org
By YaminThu 2741 days ago on ပြည်တွင်း from burma.irrawaddy.org
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ သစ်စက်အချို့မှ ကျွန်းသစ်တန် ၁၅၀၀ နီးပါးကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ရောင်းချမည်
By YaminThu 2753 days ago on စီးပွားရေး from www.first-11.com
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ကာ တစ်နှစ်အတွက် ပြည်တွင်းသုံးရန် သစ်မာသစ်လုံးတန် ၆၀၀၀၀၀ ကို ပုဂ္ဂလိက သစ်စက်ပိုင်ရှင်များထံ အိတ်ဖွင့်လေလံ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းက အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သစ်မာ ၁၃၅၅၂၂၇ တန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၇၈၇၆၀၀ တန်သာ ထုတ်လုပ်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ ပြည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက် တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီး တန်ဖိုးမြင့် သစ်အချောထည်များသာ တင်ပို့ရောင်းချခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း . . . . .
ကလေးဝ နည်းပညာမြင့် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းအား တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း တင်ပြ၍ စင်ကာပူကုမ္ပဏီနှင့် ပြောင်းလုပ်မည်
ကလေးဝ မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိမ်း မေးမြန်းသည့် "ကလေးမြို့တွင် ကျောက်မီးသွေးသုံးစက်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့်ဒေသ၊ နေ့ရက်နှင့် အမျိုးအစားတူစက်မျိုး ဟုတ်၊ မဟုတ်" နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ China Guodian Corporation သည် စီမံကိန်းအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအား စွန့်လွှတ်ပါကြောင်း . . . . .
ရန်ကုန်တိုင်း စီးပွားရေးမှာ လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန် မှန်းထားပြီး အဓိက ထွက်ကုန်မှာ စက်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှဖြစ်နိုင်
By YaminThu 2753 days ago on ပြည်တွင်း from www.first-11.com
''ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း စီးပွားရေး အလားအလာမှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထိ ငါးနှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှတိုးတက်မှုနှုန်း ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင်းနှုန်း တိုးတက်လာမယ်လို့ မှန်းဆထားပါတယ်။ ဒီတိုင်းရဲ့ အဓိက ထွက်ကုန်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာကဏ္ဍကတော့ ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း လောက်သာ ရှိပါတယ်'' ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးဦးစိုးမင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကာ စီမံကိန်းကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အိုဒီအေ ချေးငွေအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ အရေးပါသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ကျော်ကို ထုတ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ချေးငွေများအား ဝေးလံခေါင်ပါးသည့် ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အရေးပါသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ရေး စီမံကိန်းနှင့် သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အကူအညီများပေးရန် ကူညီခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ JICA မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
''ဒီနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အိုဒီအေ ချေးငွေ ၉၀၀ ကျော်ကို ထုတ်ချေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ထုတ်ချေးရာမှာလည်း သီလ၀ါ စက်မှုဇုန် အပါအ၀င် ကဏ္ဍသုံးခုမှ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ခိုးမှုအများအပြား ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် လမ်းပေါ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကောက်သူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီး
ခိုးမှုများ လျော့နည်းစေရန်အတွက် ယင်းကဲ့သို့ လိုက်လံဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေသည့်အပြင် ပြည်သူများကို ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''တချို့ခိုးမှု ဖြစ်စဉ်တွေမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို လိုက်လံကောက်နေတဲ့ သူတွေက လစ်ရင် လစ်သလို ကျူးလွန်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အဲဒီလူတွေကို ဖမ်းဆီးပြီးတော့ စစ်ဆေးတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ် ဆိုရင်တော့ ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်မယ်။ ဘာမှ မဟုတ်ရင်တော့ စည်ပင်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တရားခံတွေကို ဖော်ထုတ်တဲ့ အခါမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တစ်ခုတည်း ဖော်ထုတ်တာထက် ပြည်သူလူထု ပူးေ
By YaminThu 2753 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.first-11.com
မြောက်ကိုရီးယားက ပြည်တွင်းဖြစ် စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသ
By YaminThu 2753 days ago on သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ from www.first-11.com
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဆင်ဆာစိစစ်ဖြတ်တောက်မှု အများဆုံးနှင့် သီးသန့်ဆန်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြောက်ကိုရီးယားက ပြည်တွင်းဖြစ် စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နာမည်ကျော် ကိုရီးယားကျေးလက်သီချင်း တစ်ပုဒ်၏ အမည်ကို အစွဲပြုကာ ယင်းစမတ်ဖုန်းအား အာရီယန် (Arirang)ဟု အမည်ပေးထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်အတွင်း စက်ရုံတစ်ရုံကို သွားရောက်စစ်ဆေးမှုအတွင်း ယင်းစမတ်ဖုန်းကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းခရီးစဉ်အတွင်း ကင်အား "အာရီယန်" ဖုန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း မြော
By YaminThu 2753 days ago on အတွေးအမြင် from www.first-11.com
By YaminThu 2753 days ago on စီးပွားရေး from news-eleven.com
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၌ ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်များကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဆွေးနွေးစေမည်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးနောက် အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ပုံနှိပ်နှင့် ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အနေဖြင့် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းပါ မှတ်ပုံတင်ခွင့်များနှင့် ကန့်သတ်မှုများ ရှိနေကြောင်း၊ ထို့သို့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုသည့် ဥပဒေများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် မိမိတို့ပါတီဝင် ငါးဦးရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးမှာ ခရီးသွားနေသဖြင့် ကျန်လေးဦးကို စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှ ပြင်ဆင်လိုသည့်
By YaminThu 2753 days ago on ပြည်တွင်း from news-eleven.com
မလေးရှားတွင် မွတ်စလင်များ ၀တ်ပြုလေ့ရှိသည့် အခန်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ တရားပွဲ ကျင်းပ
မွတ်စလင်များ ၀တ်ပြုလေ့ရှိသည့် အခန်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ တရားပွဲကျင်းပရန် ငှားရမ်းခဲ့သည့်အတွက် အပန်းဖြေ ရိပ်သာပိုင်ရှင်ကို မလေးရှားရဲများက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ကြောင်း သြဂုတ် ၁၃ ရက်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ မလေးရှားတောင်ပိုင်း၊ ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရှိ အပန်းဖြေရိပ်သာကို ပိုင်ဆိုင်သူအား သြဂုတ် ၁၁ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စော်ကားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ခရိုင်ရဲအကြီးအကဲ နော်ရာဆစ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသခံ မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အပန်းဖြေရိပ်သာ ပိုင်ရှင်သည် မွတ်စလင်ဘာသာဝင် စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး မလေးရှားတွင် အမြဲတမ်း နေထို
အရေးယူမှုများ အလွန် အိမ်ခြံမြေ
By YaminThu 2768 days ago on ပြည်တွင်း from news.yatanarpon.com.mm
ရှားရှားပါးပါး ပြည်တွင်းအခွန်မှ အဆင့်မြင့် ဝန်ထမ်းများအား အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ပတ်သက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် အရေးယူခဲ့ပြီးနောက် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) ဖြင့် ရောင်းချမှုများ ပိုမိုများပြားလာသည်။ “Special Power (အထူး ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာ) က သက်တမ်းက တစ်နှစ်ရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင်နေမယ့်လူ မဟုတ်ဘဲ ပြန်ရောင်းမယ့် လူတွေကျတော့ အမည်မပြောင်းတော့ဘဲ Special Power နဲ့ပဲ ဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်ကို ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်။ နာမည်ပြောင်းဖို့ လုပ်ရင် အခွန်ဆောင်ရပြီ” ဟု အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရာတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက် ပေးနေသော ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောသည်။
စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲ အသစ်များ ထွက်ရှိ
By YaminThu 2768 days ago on သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ from news.yatanarpon.com.mm
အရောင်းဆိုင်သုံး Multi POS System, စားသောက်ဆိုင်သုံး Restaurant Master၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်သုံး Pharmacy Shop POS System စသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများ ဇူလိုင် ဒုတိယပတ်မှစ၍ ဈေးကွက်၌ ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲများကို Excellent Business Management Solution ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ကာ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် လုပ်ငန်း သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ အရောင်းဆိုင်သုံး ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ကုန်ရောင်း၊ ကုန်ဝယ်၊ လက်ကျန်၊ အကြွေး၊ ရင်းနှီးငွေ၊ အမြတ်ငွေ၊ ဝန်ထမ်းလစာ၊ ငွေစာရင်းပိုင်း၊ စာရင်းချုပ်ပိုင်းတို့ ပ